Indostria 2017 : nifampidinika ny fanjakana sy ny tsy miankina | NewsMada
Indostria 2017 : nifampidinika ny fanjakana sy ny tsy miankina
Par Taratra sur 27/01/2018
Notanterahina ny 25 janoary teo teny amin’ny espace Tiana, Tsilazaina, ny fifampiarahabana asaramanitra eo anivon’ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. Nanaovana jery todika ny zava-bita tamin’ny taon-dasa 2017, nilazana ny fahavitan’ny Lalàna momba ny fampandrosoana ny indostria (LDI) sy ny fiarovana ny voka-pikarohana (propriété intellectuelle). Navoitra tamin’io fotoana io ihany koa ny vokatra hita eo amin’ny fifampidinihan’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina, azo lazaina fa nitondra ny anjara birikiny eo amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fandraharahana. Singa iray tena mbola mahavelon-taraina ny orinasa betsaka ny famatsiana angovo sy ny fitaterana.
Teo koa ny fampahalalana momba ny indostria eto Madagasikara, natao teo amin’ny lapan’ny Tanàna Analakely, nifanandrify tamin’ny “Andron’ny indostria aty Afrika”, ny volana novambra 2017 ; ary vao tamin’ny 18 janoary teo ny fitokanana trano fiasana vaovao eo Anosy an’ny minisitera. Notsipihin’ny sekretera jeneraly ny fahavitrihan’ny mpiasan’ny minisitera nahavitana izany rehetra izany ka notsiahiviny manokana ny momba ny fiahiana sosialin’ny mpiasa mba hampivitrika azy ireo hatrany.
Nisaotra ny ezaka vitan’ny rehetra tamin’ny taon-dasa ny minisitra, Tazafy Armand. Mitodika amin’ny hoavy ny minisitra ka mampahatsiahy ny amin’ny tokony hanamafisana hatrany ireo ezaka efa vita taloha, ho fandrasaisana anjara amin’ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena. Nanombohana ny fotoana fifampiarahabana ny fanomezana mari-boninahitra ny mpiasa sy fisaorana ireo nahavita be ao amin’izany minisitera izany.